သင်မှတဆင့်ကျော်သွားကြပြီဆိုပါက ကျော်၏စာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက်2အဆုံး သို့ဖြစ်လျှင်ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်အောက်ကအဖြေကိုဖတ်ပါ။ ဤရွေ့ကားဖတ်နေ comprehension သင်ထောက်ကူအဖြေတွေကိုဆောင်းပါးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအမှန်တကယ်မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်အများကြီးအဓိပ္ပာယ်စေမည်မဟုတ်။
ပရင့်ထုတ်ရန် PDF များ: ကျော်စာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက်၏အဆုံး | ကျော်စာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက်အဖြေ Key ကို၏အဆုံး
အဘယ်ကြောင့်? ကျနော်တို့ကအမြိုးသမီးတစားရန် likes ဘယ်မှာမျှစိတ်ကူးရှိသည်ကြောင့်တစ်ဦးကမမှန်ကန်ပါ။ စာသားထဲမှာဘယ်အရာကမှသူမ၏ဦးစားပေးရည်ညွှန်းစေသည်။ ကျနော်တို့ကမိန်းမအမှန်တကယ်ကပျော်မွေ့ဖို့စွမ်းရည်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူမ, အစာစားခြင်းရဲ့အဘယ်အရာကိုပင်မသိကြောင်းအခြနိုငျသောကွောငျ့ B ကမမှန်ကန်ပါ။ သူမ၏ထိရောက်မှုသူမ၏ထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံကနေ detracting ထက်ကတိုးမြှင့်သည်ကို ထောက်. , C မမှန်ကန်ပါ။ စာရေးသူဖြစ်စေထိုလိုင်းများအတွက် healthfully အစာစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဘာမှတက်တတ်၏ဘယ်တော့မှဒါကြောင့်အီးထွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူမ၏အပေါ်နေရာတရားစီရင်တော်မူသူမ၏စားသုံးမှုကိုစက်ဆုတ်စိတ်ပျက်မိကြောင်းရဲ့အခြနိုင်သည် "ဟုသူမကတစ်စုံတစ်ဦးကသူမကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်ဟုလူသိများခဲ့, ငါသူမကကွဲပြားခြားနားစွာစားကြလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်။ " ဤသည်မှာအရှင်သူမ၏စားသောက်မှုအလေ့အထများများအတွက်စာရေးဆရာရဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဖေါ်ပြခြင်းသူမကခဲ့အဖြစ်သူမစားရန်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်ရပြီမယ်လို့ဆိုလို။
2. ကျမ်းပိုဒ်အရ, လူတွေ overeat အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်
အဘယ်ကြောင့်? A, B, C ကကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင်သော်လည်းမကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျော်တစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည်။ E ကိုတစ်ဦး distractor အဖြေဖြစ်ပါတယ် - အစာစားခြင်းလျင်မြန်စွာဝါးမဟုတ်သို့ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်, သို့သော်ကျမ်းပိုဒ်ဆိုလိုသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကျွန်တော်လျင်မြန်စွာအစာစားရန်အသုံးပြုကြသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ overeat မပေးပါ။ အဆိုပါကျမ်းပိုဒ်မျိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်သောသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. တိကျသောအသေးစိတျကိုပေးတော်မူ၏, ငါတို့သည်ဤသို့ B ကိုဖြေဆိုသင့်ပါတယ်ထက်ပိုမိုစားရန်ခွင့်ပြုအလွန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်? ဒါဟာအသားကြက်သား (လိုင်း 32) အဖြူပါပဲ။ ဤသည်ကိုအသေးစိတ်မေးခွန်းသူတို့ "အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေး" အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့စာဖတ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့နီးပါးဘာမျှမရှိသည်ကြောင့်လှည်ဖြစ်ပေမယ့်အစားသင်ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ဆက်စပ်သောအသေးစိတ်ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုဂရုတစိုက်အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။
(ခ) သန့်စင်အစားအသောက်ကသူတို့လုပ်နေတဲ့ဆင်းရဲသားကိုအစားအစာရွေးချယ်မှုမသိသောလူစွန့်ခွာ, ဘယ်လောက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သူကမျက်နှာဖုံးများ, တွန်းလှန်နှင့်စားရန်လွယ်ကူသည်လို့ပဲ။
အဘယ်ကြောင့်? ကဆောင်းပါးထဲမှာလုံးဝသော့ချက်ဖြစ်သောသန့်စင်ပြီးအစားအစာ, ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်နေသောကြောင့်တစ်ဦးကလည်းကျယ်ပြန့်သည်။ ကသာငရုတ်သီးရဲ့ဖျောပွသောကွောငျ့ကို C ကျဉ်းဖြစ်ပြီး, စာစီစာကုံးရုံတစျခုစားသောက်ဆိုင်ကျော်လွန်တတ်၏။ လူတွေကြောင့်ဆောင်းပါး၏ကျန်းမာသန်စွမ်းပါလိမ့်မည်ကြောင်း - D ကိုတစ်ဦး supposition စေသည်။ ဖော်ပြသို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဆိုလို, ဒါကြောင့်အဓိကစိတ်ကူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖွစျနိုငျဘယ်တော့မှရဲ့။ E ကိုသိပ်ကျဉ်းမြောင်းဖြစ်တယ်, ဒါ B ကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အပိုဒ်လေး၏ပထမဦးဆုံးဝါကျ, နှုတ်ကပတ်တော်ကို "သန်စွမ်း" အများဆုံးနီးပါးနည်းလမ်းများခုနှစ်တွင် 5.
အဘယ်ကြောင့်? သင့်ရဲ့ဝေါဟာရအသိပညာသို့မဟုတ်ရန်သင့်စွမ်းရည်ဘယ်အရပ်ကဒီမှာဖွင့် အခြေအနေတွင် Vocab စကားလုံးများကိုနားလည် နေရာလေးကိုအတွက်လာ။ သင်စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိခဲ့ပါလျှင်, သင်စာသားအပေါ်အခြေခံပြီးအရာအခြို့ယူဆနိုင်: " ... ထိုမိနျးမသန်စွမ်းခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းနှင့်အတူသူမ၏အစားအစာတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ " အဆိုပါတွဲဖက် "နှင့်" အလားတူဓိပ်ပာယျနှငျ့စကားလုံးနှစ်လုံး / စာပိုဒ်တိုများပူးပေါင်းမည်ကတည်းကကို C ထုတ်ဖြစ်ပါသည် - lethargy ပျင်းရိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါစကားလုံးတစ်ခုထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပျော်အပါးနှင့်အတူကောင်းစွာတိုက်ဆိုင်ပါဘူး "တိုက်ခိုက်ခဲ့" ။ မိန်းမကိုကြည့်သူများ၏သတိမထားမိခဲ့ကတည်းက flamboyance, B, အရမ်းထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက D နှင့်အီးလိမ္မာသည် ဖြစ်. အချို့မျိုး sneakiness ညွှန်ပြနှင့်မိန်းမကို Ariane ထဲဖြစ်ခြင်းမခံခဲ့ရပေမယ့်, သူမဖြစ်စေသူမ၏အစားအစာ sneaking မခံခဲ့ရ, ဒါကြောင့် D ကိုကိုအကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်ပါတယ်ထွက်ခွာမည်။ ဒါဟာဝါကျနှင့်အတူကောင်းစွာကိုက်ညီ။
သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ရမှတ်ပျက်စီးနိုင်သလားဒါက7ဘုံ Grammar အမှား
သင်ထောက်ကူ 1 အဖြေ Key ကို: စာရေးဆရာရဲ့ Tone
မူလတန်းကျောင်းကျောင်းသားများအဘို့ 50 အာကာသလှုပ်ရှားမှုများ
အဘယ်ကြောင့်ငါ7Pin ထွက်ခွာလား
အနုပညာရှင်ဟင်နရီ Ossawa သားရေလုပ်သမား
ဆီမှက de Beauvoir အားဖြင့် "ဒီအမျိုးသမီးဖကျြဆီး"
တာဝန် grade အချိန် Writing Cut မှသိကောင်းစရာများ
ထိပ်တန်းမီချီဂန်ကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
Natufian ကာလ - Pre-မြေအိုး Neolithic ၏ Hunter-စုရုံးခြင်းဘိုးဘေးများ
Surf ရဲ့ Up ကို (2007) - ဓာတ်ပုံများနှင့်ဇာတ်ကောင်
ထိပ်တန်း 10 ကြောင်-and Mouse ကိုရာဇဝတ်မှုရုပ်ရှင်